इसेवा एकाउन्टमा बैंक खाता सिधै लिंक गर्न सकिने, रकम लोड गर्न झनै सहज — onlinedabali.com
डबली संवाददाता२०७८ बैशाख २१ गते
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘इसेवा’ प्रयोगकर्ताले इसेवा एकाउन्टलाई सिधै बैंक खातामा लिंक गर्न सक्ने भएका छन् । योसँगै आफुले चाहेको बैंक खातामा इसेवा खाता लिंक गरी इसेवा खातामा रकम लोड गर्न सकिनेछ ।
अब इसेवा एकाउन्टलाई बैंक एकाउन्टमा लिंक गरिसकेपछि प्रयोगकर्ताले मोबाईल बैंकिङमार्फत अझ सहज ढंगले इसेवामा रकम लोड गर्न सक्ने इसेवाले जनाएको छ । आफ्ना प्रयोगकर्तालाई रकम लोड गर्न अझ सहज होस् भन्ने उदेश्यले एकाउन्ट लिंक गर्न सकिने सुविधा ल्याएको इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले जानकारी दिए ।
“इसेवा जहिले पनि आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नविनतम सेवा दिनका लागि अग्रसर छ । नयाँ सेवाका साथै प्रयोगकर्तालाई रकम लोड गर्नका लागि अझ सहज होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो सेवाको सुरूवात गरेका हौँ” सापकोटाले भने । एकाउन्ट लिंक सेवा प्रयोग गर्नका लागि इसेवा प्रयोगकर्ताको इसेवा एकाउन्ट प्रमाणित (ख्भचषष्भम) भएको हुनुपर्नेछ ।
साथै, यो सेवा लिनका लागि इसेवा प्रयोगकर्तासँग एकाउन्ट लिंक गर्ने बैंकको मोबाईल बैंकिङ लिएको हुनुपर्नेछ भने इसेवामा भएको मोबाईल नम्बर र बैंकमा रहेको मोबाईल नम्बर पनि एउटै हुनुपर्नेछ । यदि इसेवामा रहेको नम्बर र बैंकमा रहेको मोबाईल नम्बर एउटै नभएको अवस्थामा बैंकमा भएको मोबाईल नम्बरलाई इसेवा एकाउन्टमा सेकेण्डरी आइडीका रुपमा राख्न सकिनेछ ।
इसेवाबाट इन्स्योरेन्स्को प्रिमियम भुक्तानी, सेयर कारोबारको भुक्तानी गर्न सकिनुका साथै मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुलकलेजलगायतका शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको महासचिवमा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका भुल चयन
यति धेरै बदनामी कमाएकाे भारतीय मद्रास कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का किन ?
क्लासिक टेकलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति आइस्पानको ध्यानाकर्षण, निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, कसको कति पुग्यो ?
प्राधिकरणका कर्मचारीले लुटेको दूरसञ्चार उपकरण फिर्ताको लागि उजुरी
मुख्यमन्त्री शाहीको स्खलन यात्राः जनयुद्धमा मन्दीर भत्काउने,अहिले कालोबोकादेखि धामीझाँक्रीको शरणमा
ओली र मुख्यमन्त्री शाक्यबीच घोचपेचः ओली भन्छन्- अब माधवको एमालेमा आवश्यक छैनन्
पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरु हस्तान्तरण सुरु, यस्ताे छ भदाै ३१ गतेसम्म पुनर्निर्माणको प्रगति
काठमाडौँबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको जीप बोक्से भीरबाट तामाकोशीमा खस्यो, चालकसहित ३ जनाको ज्यान गयो,